La kulanka daryeelka caafimaadka | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Barashada bulshada / Buuga "Om Sverige" / Daryeelidda caafimaadka ee dalka Iswiidan / La kulanka daryeelka caafimaadka
Markii aad la hadleeyso shaqaalaha daryeeka caafimaadka - sida dhakhtarka ama kalkaalisada - waxaad uu sheeganeeysaa waxa aad uu baahantahay. Adiga ayaa la socdo dhibaatada ku heeyso.
Dhamaan shaqaalaha daryeelka waxaa saaran waajibka sirqarinta. Mecnaheed waa in ee san qof kale uga warami karin dhibaatadaada-caafimaadeed.
Haddii afka iswiidhishka aheeyn afkaada hooyo, waxaad xaq uu lee dahay turjumaan. Marka aad waqti balansaneeyso uga waram haddii aad turjumaan ubaahantahay. Sido kale turjumaanka waxaa saaran waajibka sir-qarinta.